နှင်းဆီ (၂) – Rose | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » နှင်းဆီ (၂) – Rose	11
နှင်းဆီ (၂) – Rose
Posted by ဇီဇီ on Dec 4, 2015 in My Dear Diary, Photography | 11 comments
ဘား မှ မဟု ပါဘု။
ပို့(စ) သာတင်ချင်တာ ဘားမှ ရေးပြီးသားမရှိတာနဲ့ လက်ထဲရှိတဲ့ နှင်းဆီ လက်ကျန်ပုံတွေ လာတင်တာပါ။
အသက်ကြီးလို့ (အဟွတ်၊ အခုကလည်း ငယ်တော့တာမဟုတ် :mrgreenn:) ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အထဲ နှင်းဆီခြံ နဲ့ ဥယျာဉ်မှူးချောချောလေး (ဟယ် နာ ဘာဒွေပြောနေဒါဘာလိမ့် :mrgreenn:) ပါပါတယ်။
ခက်တာကလည်း ကိုယ့်လက်နဲ့ထိတဲ့ ပန်း (အဲလေ) အပင်တွေက သေလေ့ရှိတော့ ဓာတ်ပုံလေးတွေစုဆောင်းရင်းပဲ စိတ်ဖြေရတော့တာပေါ့လေ။
ငုရင်ထရန် ဟုရန်မေ ရဲ့ ကိုကိုး says: ပန်းတွေကျိပြီး နွဲ့ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်
kai says: ပန်းသေတဲ့လက်… အဲလေ… အပင်သေတဲ့လက်ပေါ့..။
ဒုက္ခ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ငုရင်ထရန် ဟုရန်မေ ရဲ့ ကိုကိုး says: ပန်းသည်ကြီးတစ်ယောက်ကပြောတယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: မှတ်သားးသွားးပါတယ်..!!
ပန်းးရောင်းးစားးရင် လိုက်နာမလို့ပါ ခညာ..!!!
Alinsett @ Maung Thura says: .ဖွေးဖွေးလေးကို အချစ်ဆုံး
Mike says: .ဇီဇီ့ရဲ့ နှင်းဆီနီလေးတစ်ပွင့် ယူလိုက်တယ်နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: No. (4) :-))))
Ma Ma says: အရောင်လေးတွေ လှလိုက်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
ムラカミ says: ခများ လိုသေးတယ်ဗျ
Kaung Kin Pyar says: နံပါတ် (၅) အရောင်လေး ရဖို့ အာလူးထဲ နှင်းဆီအဖြူကိုင်း ထိုးစိုက်ကြတယ်..။
နံပါတ် (၄) နဲ့ (၆) ကို ကြိုက်တယ်..
ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားဘက်နားမှာ ပျိုးပင်တွေတွေ့တာ..။ ရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်လောက်သွားဝယ်ပြီး စိုက်ကြည့်ဖို့တော့ စဉ်းစားမိပြီး မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးရယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: နှင်းဆီဆိုရင် အနံမွှေးတာ ပိုနှစ်သက်တယ်